सकसमा समाजवादी: सत्ता न सडक
अपडेटः १४ जेठ २०७७ । ९:०० स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
लिलाराज खनाल काठमाडौं, १९ कात्तिक
संविधान संशोधनमार्फत मधेशी र मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै डेढ वर्षअघि सत्तारोहण गरेको मधेशकेन्द्रित दल समाजवादी पार्टी सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिएर सडक आन्दोलनमा जाने भन्ने दोधारमा परेको छ ।
सत्तामा गएर संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले सत्तामा पुगेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यतिबेला सत्तामै बस्ने कि सडकमा जाने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् ।
गत जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेका समाजवादी अध्यक्ष यादव सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर पनि उपेक्षाको शिकार बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यको आधार मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने भन्दै लहडको भरमा संविधान संशोधन नहुने भन्दै आएका छन् । सरकार सञ्चालनमा समेत सत्ता साझेदार दलको रूपमा समाजवादीलाई व्यवहार नगरिएपछि अध्यक्ष यादवलाई सरकार छाड्न दबाब आइरहेको छ ।
यादव नेतृत्वको पार्टीसँग एकीकरण भएकै दिनदेखि अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको कटु आलोचना गर्दै पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै आएका छन् । भट्टराईको यस्तो धारणाप्रति समाजवादी पार्टीभित्र जनमत वृद्धि हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका यादवलाई मन्त्रालयमातहत र सम्बन्धित रहेको निकायमा समेत अधिकार प्रयोग गर्न नदिएपछि यादव प्रधानमन्त्रीसँग रूष्ट बनेका छन् । उनको यो रूष्टता वाहिर अउन मात्र सकेको छैन । पर्ख र हेरको रणनीति लिएका यादवको धैर्यता धेरै दिन टिक्न सक्ने देखिँदैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्दा होस् वा सोमबार सात जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा होस्, सत्ता साझेदार दल समाजवादी पार्टीसँग कुनै सहमति, सल्लाह वा प्रतिनिधित्वसमेत नभएपछि सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी सकसमा परेकाे छ ।
मेडिकल काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै सल्लाह वा सहमति लिएको पाइँदैन । पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दलको हैसियत बनाएको समाजवादी पार्टीलाई नीतिगत निर्णयमा समेत उपेक्षा गरेको पाइन्छ ।
समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रदेशका प्रमुखको नियुक्ति वा बर्खास्तगी दुवै वास्तविक संघीयताका मर्मविपरीत र दलीय रबरस्ट्याम्पका प्रतीकको रूपमा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्र्दै वर्तमान सरकार एकमनावादी, एकात्मक र निरंकुश चरित्रको भएको पुनः पुष्टिठ भएको आलोचना गर्दै सबै संघीयता पक्षधर लोकतान्त्रिक शक्ति गम्भीर बन्न, जनयुद्ध, मधेश, जनजाति, थारू, दलित आन्दोलनकारीलाई एक हुन आव्हान गरेका छन् ।
सत्तारुढ समाजवादीका एउटा अध्यक्ष यादव चुप बस्नु र अर्का अध्यक्ष भट्टराई सरकारविरुद्ध लाग्नुलाई धेरैले दोधारे नीति भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन् । सडकमा जान पनि समाजवादीलाई त्यति धेरै सहज छैन ।
संसदको तेस्रो ठूलो दलको हैसियत बनाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गत फागुनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडक संघर्षको तयारीमा छ । सडक आन्दोलनको नेतृत्व राजपालाई गर्न दिने पक्षमा समाजवादी छैन ।सरकार छाडेर राजपासँग एकीककरण गर्ने बिषयमा पार्टीभित्रै एकमत पनि छैन ।
सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर अर्को मधेशकेन्द्रित दल राजपा आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुट्दै गर्दा पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेर समाजवादीले सम्भावित आन्दोलनलाई समेत रोकेको छ । नपाक्ने खिचडी पकाउने प्रयास गरेको समाजवादीले एकताका लागि पत्र मात्र होइन, अनौपचारिक वार्ताका लागि अर्का अध्यक्ष डा. भट्टराईलाई जिम्मेवारी पनि दिएका थिए ।
मधेश आन्दोलनमा लागेर मधेशको विरासत र प्रभाव राजपाले फर्काउन सक्ने त्रास समाजवादी पार्टीलाई छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन र नीतिगत निर्णय गर्दा राज्यको विभेद मात्र होइन, उपेक्षा गरिएको दल समाजवादी पार्टी सरकारमा टाँसिएको छ ।
सरकारमा बसेकै कारण संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन भनेर घोषणा गर्न नसकेको समाजवादीको नेतृत्वमा माथि कार्यकर्ता र जिल्लास्तरीय नेताले आलोचना र टिप्पणी गरेका थिए । सत्तामा बसेर मधेश र मधेशीको पक्षमा कुनै काम हुन नसकेको भन्दै कार्यकर्ताले आलोचना गरेपछि उपेन्द्रले दबाब महसुस गरेका छन् ।
आगामी ६ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बेलामा सरकारमा बसिरहँदा मधेश र मधेशीको भावनालाई समात्न र आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप लाग्ने त्रास र भय उपेन्द्रलाई छ ।
प्रदेश २ मा राजपासँग मिलेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समावादी पार्टी प्रदेश सरकारमा बसेर गरेको सुविधा भोगलाई चटक्क छाड्ने पक्षमा पनि छैन । त्यसैले सत्तामा कि सडकमा भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकेको राजपा नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको गुनासो, टिप्पणीदेखि आलोचना र आक्रोशको पारो पनि बढ्दै गएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १९, २०७६, १४:४४:००
चीनका राष्ट्रपति सीद्वारा सेनालाई युद्धको तयारी गर्न निर्देशन !
१५ महिने बालकसहित वीरगञ्जका २१ जनाले जिते कोरोना
सुर्खेतमा भारतबाट आएका १ युवकको मृत्यु
स्वास्थ्य सेवामा अब्बल बन्दै बागमती प्रदेश
बायर्न उपाधि होडमा बलियो, डर्टमुन्डमाथि १–० को महत्वपूर्ण जीत